Khabar Break - राम्री युवतीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? अपनाउनुस यि तरिका
Thursday 19th of October 2017, 5:46:08 am
राम्री युवतीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? अपनाउनुस यि तरिका
राेचक Published On: Tuesday 22nd of November 2016, 06:55 PM
तपाईंको तमाम कोशिशका बाबजुद पनि महिला तपाईंसँग आकर्षित हुन्न । आखिरी किन ? यसका लागि तपाईं आफ्नो लुक्स र स्वच्छताप्रति काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । जान्नुहोस् कसरी तपाईं युवतीलाई आकर्षित गर्न सक्नु हुन्छ । राम्रो देखिनु तपाईंको हातको कुरा हो ,आफूलाई राम्रो देखाउन तपाईंको हातको कुरा हो । यसका लागि तपाईंको धेरै मेहनत आवश्यक पर्दैन । तपाईं आफ्नो आलस्यता त्यागेर लुक्समा ध्यान दिनु जरुरी छ । आखिरी तपाईंको लुक्सले नै महिलालाई आकर्षित गर्ने हो । यसर्थ थोरै मेहनतमा यस्तो गर्नु जरुरी छ ।
1. केही कुरामा ध्यान दिनू
2. धेरै पसिना आउनु
3. तपाईंको दाँत पहेंलो छ ?
4. आँखीभौंको बीचमा रौं छ ?
6.छालामा केही समस्या छ कि ?
8.केही पहल गर्नुहोस्
भनिन्छ नि, ‘मान्छेको बोलीले नै उसको भविश्यको बाटो तय गर्छ ।’ यो भनाइ यसमा पनि लागू हुन्छ । हुन सक्छ कि कुनै युवतीको मनमा तपाईंको लागि केही भावना उठिरहेको छ । तर तपाईंको बोलीका कारण उसले तपाईंलाई टाढा राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ युवतीसँग बोल्ने क्रममा आफ्नो वाणीलाई नियन्त्रित राख्दै सोचेर बोल्नुहोस् ।
के तपाईको विहान उठ्दा स्वास गनाउँछ अपनाउनुहोस् यि १० उपाय
ढलबाट निकालियो ४३ किलो सुन, ३ हजार किलो चाँदी
अंग्रेजी १२ महिनाको नाम कसरी राखियो?